Milatariga oo lawareegay Talada Dalka Zimbabwe +SAWIRRO. – Xeernews24
Milatariga oo lawareegay Talada Dalka Zimbabwe +SAWIRRO.
Waaberigii hore ee saaka ayey Milliteriga dalkaasi waxay la wareegeen Talada dalkaasi, waxayna Gaadiidka Gaashaaman ku go’doomiyeen dhamaan Xafiisyadda Dowladda, Dhismaha Barlamaanka iyo Maxkamadda Sare ee ku yaalla Caasimadda dalkaasi ee Harare.
Madaxweyne Zimbabwe iyo Xaaskiisa Grace Mugabe oo rajeynayso inay Xilka kala wareegto Ninkeeda ayaan la arkin ama la maqlin halka ay ku dambeeyeen halka waraka qaarna sheegayaan in ay dalka ka baxsatay.
Wasiirkii Maaliyadda ee dalkaasi, Ignatius Chombo oo hoggaamiya Garabka G40 ee Xisbiga ZANU PF ee haya Talada dalkaasi ayaa la sheegay inay Ciiddanku Xabsiga dhigeen.
“Isla marka aan dhamayno Hawlgalkaasi, waxaan rajeynaynaa inay Xaalladu caadi noqon doonto”ayuu yidhi Jeneral SB Moyo.
Madaxweyne Mugabe oo loogu yeedho Odayga ugu weyn Siyaasiyiinta Afrika waxa uu dalka Zimbabwe xukumay muddo 37-sanno ah.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/11/mugabe.jpg 183 275 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-11-15 17:29:452017-11-15 18:36:05Milatariga oo lawareegay Talada Dalka Zimbabwe +SAWIRRO.
Daawo Sawiradda Saraakiil Britain ah oo cidna ka war hayn kana Howlgala wadanka... DEG DEG: Xisbiga Wadani oo wadnuhu dhag leeyahay kuna dhawaaqay Go,aan cusu...